भाग्यमानीले मात्र देख्ने सुन रङ्गको नाग देवतालाई देखेको ३ सेकेन्डमा कमेन्टमा ॐ लेखि सेयर गरेमा मनोकामना पुरा हुनेछ! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > भाग्यमानीले मात्र देख्ने सुन रङ्गको नाग देवतालाई देखेको ३ सेकेन्डमा कमेन्टमा ॐ लेखि सेयर गरेमा मनोकामना पुरा हुनेछ!
भाग्यमानीले मात्र देख्ने सुन रङ्गको नाग देवतालाई देखेको ३ सेकेन्डमा कमेन्टमा ॐ लेखि सेयर गरेमा मनोकामना पुरा हुनेछ!
admin July 26, 2020 July 26, 2020 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति 0
प्रहरीले ९ दिनपछि (अगष्ट १३ तारिख) आरोपी विनोदविरुद्ध अदालतमा मुद्धा पेश गरेका थिए । तीन वर्षीया ती बालिकालाई बलात्कार गर्ने यौन पिपासु विनोदलाई फाँसीको सजाय सुनाउँदै न्यायाधीश निरजा दाधीचले भावुक कवितासमेत लेखेर सुनाएका थिए । न्यायाधीशले आफ्नो फैसला सुनाउँदै भने, ‘यस प्रकारको अपराधिहरुलाई समाजमा बाँच्ने अधिकार नै छैन ।’ यसका साथै उनले तीन वर्षीया बालिकाहरु घरमा एक्लै छोड्नु पनि असुरक्षित भएको समेत बताए ।
किन पुगे जेनी कुँवरलाई दिदी बनाउन पुण्य गौतम खादा लिएर पशुपतिमा (भिडियो हेर्नुस्)
यति हेण्डसम इन्डियन लाहुरे श्रीमान छोडेर श्रीमती अर्कैसङ्ग, ४ बर्षिया छोरीको बिचल्ली! मिडियामा श्रीमान(भिडियो हेर्नुस)
बधाइ छ नेपाली चेली! नेपालकी सम्झना राई बनिन् कोरियाको पहिलो नेपाली प्रहरी अधिकृत !
यी ३ राशि भएका महिला, जसले पतिलाई आफ्नो अगाडि झुक्न बाध्य पार्छन